SS stud mabhaudhi / SS kaviri magumo tambo tsvimbo - China SS stud mabhaudhi / SS kaviri magumo tambo tsvimbo Mutengesi, Fekitori -Shanghai T&Y Hardware Viwanda.
musha » chigadzirwa » ms / isina tambo tambo
SS stud mabhaudhi / SS kaviri magumo tambo tsvimbo
Standard:Stud bhaudhi netsika
Usage: Kuvaka, Bridge
Processing:Cold ndokugadzira Warm ndokugadzira
T&Y Hardware Co, Ltd / Haiyan Simba Fastener Co, Ltd yakavambwa mugore ra2007, sekambani yehunyanzvi iri kuita mukugadzira uye kushambadzira kwezvisungo, Uye kuitira kuti tiwane makwikwi uye nemhando yepamusoro, kubva muna Chikunguru wa2011 & isu takanyorera. ISO manejimendi yeedu akazara maitiro ekugadzira anosanganisira GB / T ISO 9001: 2008 chitupa
Zvigadzirwa zvedu zvikamu zvakakura zvinosanganisira Kuvaka Fasteners, Machines Fasteners, Furniture Fasteners, Security Fasteners, pamwe nemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvakagadzirwa zvisina kujairika zvekubatanidza uye zvigadzirwa. isu takanga tapa kune vedu vekuChina vatengi vekuvaka uye musika wepasi rose yakawanda yekumisikidza zvinoenderana nemhando dzakasiyana senge IFI, DIN, ANSI, BS nezvimwewo zvigadzirwa zvedu zvave kushandiswa zvakanyanya kumakambani mazhinji anozivikanwa muminda yakawanda yemabhizimusi kusanganisira munda weaviation, petrochemical, kuvaka ngarava, kuvaka dzimba, zuva, mota, njanji, michina, mauto, magetsi, kutaurirana, nezvimwe. Tine simba reboka rebasa rakazvipira kupa mhinduro yakanakisa kune vatengi vedu.
4.Kutakura & Kutumira
Kambani yedu yakapinda iyo yekutsanya show kutenderera pasirese gore rega rega, Isu tinotora chikamu mune dzese nyika 'fastener show, isu tinonyanya kutora chikamu muUnited States, Mexico neGerman kuratidzira, tichitarisira kusangana newe pashoo.
Square Nuts / Kumenya Nuts / Chiteshi Nuts pamwe Square
Aluminium Oiri Cap / Aluminium CNC Zvikamu
Brass pombi yakakodzera gokora / yendarira pombi plug plug kugokora